Waa maxay nidaamka digniinta ee lagu doorto gurigaaga? | Ragga Stylish
Waa maxay nidaamka digniinta ee lagu doorto gurigaaga?
Paco Maria Garcia | | Tiknoolaji
Hadaad tixgaliso rakibidda qalabka digniinta guriga, waxaa jira tilmaamo la raaco. Waxay ku saabsan tahay xulashada mid sifiican ula jaan qaadaya baahiyaha ganacsigaaga ama astaamaha gurigaaga.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato ayaa ah, Markaad dooranaysid nidaamkaaga digniinta, astaamaha gurigaaga ayaa si weyn saameyn ugu leh.
Isku mid maahan haddii ay ku jirto aag la ilaaliyo. Ama haddii ay jirto xayndaab amni ama in kale. Sidoo kale waa muhiim haddii gurigaagu qayb ka yahay beel leh milkiileyaal ama haddii ay go'doon tahay.
Dhammaan arrimahan waxaa falanqeyn doona khabiir xagga amniga ah.
1 Xagee laga rakibaa nidaamka amniga?
2 Kaamirooyinka amniga
3 Qaylodhaanta ugu fiican
Xagee laga rakibaa nidaamka amniga?
Arrinta xigta ee ay tahay inaad tixgeliso ayaa ah meesha qalabka lagu rakibayo. Fikrad ahaan, waa in had iyo jeer la qariyo, si ay ugu muuqdaan kuwa weerarka soo qaaday, kharbudaad suurtagal ah.
Intaa waxaa dheer, waxaa lagu talinayaa in Qaylo-dhaanta waxay leedahay alwaaxda baaritaanka taas oo calaamad u siineysa Xarunta Soo-Dhaweynta Qalabka (CRA).
Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah difaaca ka hortagayaasha. Waxay ku saabsan tahay alaarmiga oo aan firfircooneyn waqti kasta. Haddii ay jirto waddo isgaarsiineed oo laba jibbaaran oo leh CRA, oo loo maro GPRS iyo Ethernet, amniga ayaa sii weynaan doona.
Ku rakibida qalabka kamarad amni sidoo kale waxay si weyn u saameyn kartaa amniga gurigaaga. Dareenkan, tayada sawirku waa inuu noqdaa HD. Qaabkan, aqoonsiga kuwa wax dilay ayaa ka dhaqso badan oo fudud.
Qaylodhaanta ugu fiican
Qaylodhaanta ugu fiican ee gurigaaga waa tan si buuxda u ilaaliya guriga, oo ay ku jiraan meelaha bannaanka ah iyo meelaha laga soo galo. Fikradda ugu muhiimsan waa amniga waqti kasta. Dadka guriga jooga, ama haddii si ku meelgaar ah guriga looga guuray.
Had iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad doorato alaarmiga taas ku habboon baahiyaha gurigaaga.
Ilaha sawirka: El Confidencial / Alarmas Tyco
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Waa maxay nidaamka digniinta ee lagu doorto gurigaaga?
Kabaha shaqada ugu fiican ee ay sameeyeen noocyada raaxada
Shan siyaabood oo loo xidho joornaalada dayrta